प्रविधि Archives - Setokalam.com
भोजपुरमा इन्सेक प्रतिनिधीको आवश्यकता
भोजपुर । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निम्ति विगत लामो समयदेखि क्रियाशील अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) विराटनगर कार्यालय अन्तर्गत भोजपुर जिल्लाका लागि इन्सेक प्रतिनिधि आवश्यक परेको भन्दै आवश्यकताको सुचना प्रकाशित गरेको छ । इन्सेकले श्रावण...
२१ औं शताव्दीकै लामो चन्द्र ग्रहण आज, नांगो आँखाले हेर्न हुन्छ कि हुँदैन ?
११ साउन, काठमाडौं । २१ औं शताव्दीको सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण आज लाग्दै छ । यो चन्द्र ग्रहण करिब १ घण्टा ४३ मिनेटसम्म रहने छ । यसलाई नेपालबाट पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । पूर्ण चन्द्र ग्रहणको...
ब्रम्हाण्डमा कति तारा छन् ? पत्ता लागिसक्यो
काठमाडौं । जब तपार्इँ हामी रातमा आकाशमा झिलमिल तारा देख्छौँ, तब हाम्रो मनमा एउटा जिज्ञासा सधै उठिरहन्छ : आखिर ब्रम्हाण्डमा कति तारा होलान् ? हुनत गीत तथा साहित्यमा नौलाख तारा भन्ने गरिएको छ । तर...
इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि फिर्ता
काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले अन्ततः इन्टरनेटमा गरिएको शुल्कवृद्धि फिर्ता लिएको छ । सेवाग्राही र सरोकारवालाको चर्को विरोधपछि सरकारले इन्टरनेटमा गरेको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको घोषणा गरेको छ । साउन १ देखि लागू भएको नयाँ शुल्क फिर्ता...
सञ्चार मत्रीले सतो लिए ईन्टरनेट प्रदायकलाई
१३ प्रतिशत शुल्कको भार उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न असम्भव : सेवा प्रदायक उपभोक्ताले दूरसञ्चारमा नयाँ शुल्क तिर्दा पनि अहिलेको मूल्यभन्दा बढी हुनु हुँदैन : मन्त्रालय सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउने...
लोकप्रिय एन्ड्रोइड एप्सको क्रियाकलापहरु डरलाग्दो खतर्नाक जासुसी भईरहेको
के तपाइँलाई थाहा छ ? तपाइँले आफ्नो फोनमा गरिरहेको कुराकानी तपाइँलाई थाहै नदिइ तेश्रो पक्षले गुपचुप सुनिरहेको हुन्छ । लक्षित विज्ञापनका लागि तपाइँको फोनमा रहेका एप्सले तपाइँको जासुसी गरिरहेका हुन्छन् । नर्थइस्टर्न विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले एक वर्ष...